Ukuseta njani iSicelo sakho seNgxabano
Ngaphantsi kwecandelo leesetingi zoSetyenziso lweeakhawunti zakho zoMsebenzisi, ungena kumantongomane kunye neebholithi zendlela yonke into esebenza ngayo apha. Usebenzisa ntoni ungeniso lweaudiyo nevidiyo? Ufuna njani Ingxabano ukujonga? Ufuna ukwaziswa njani kunxibelelwano olutsha kwaye nini? Useta yonke le nto apha. Kuninzi ukwenza ngokwezifiso kwi-Discord, kwaye yonke le yinxalenye yamava ekwenzeni eli qonga livakale ngathi yindawo ofuna ukuchitha ixesha elininzi kuyo nabahlobo. Kutheni ungazenzeli ngokwakho?
Yiya kwikona esezantsi ekhohlo yeNgxubakaxaka, ucofe iiVili zoMsebenzisi zevili, kwaye ucofe kanye kwiLizwi kunye neVidiyo kwicandelo lokuSeta iiNkqubo. Phezulu kwefestile zizinto zokufaka kunye neziphumo zomsindo wakho.
Ilizwi kunye neVidiyo zikunika ingxoxo yeaudio kunye nevidiyo, usebenzisa nokuba yeyiphi na eyakhelweyo kwiilaptop yakho okanye izixhobo ze-plug-in ozifakileyo.
Jonga umgangatho wesiginali yakho engenayo ngokunqakraza kwiQhosha eliQhosha. Xa ujonge esona siginali silungileyo, ufuna ukuqiniseka ukuba umqondiso wakho uyabhabha ngaphakathi kokuluhlaza kokufundwayo, okanye imitha yeVolumu yeYunithi (VU). Ukuba ungxole kakhulu, isiginali iya kuba phezulu kwaye igqwetheke, okanye kugqithisile .
Ngaphantsi nje kwemitha ye-VU, kuya kufuneka uqaphele ukuba Umsebenzi weLizwi ukhethiwe, oko kuthetha ukuba unxibelelwano lweaudio lwenziwe. Shiya i-Push to Talk ingakhethwanga.
Ukutyhala kuThetha kulapho kuya kufuneka usebenzise indlela emfutshane ukunxibelelana nabanye kwincoko yakho, njengonomathotholo waBemi beBhunga (CB). Ukutyhala kuThetha kuluncedo ukuba ubamba udliwanondlebe okanye iingxoxo ezijikelezayo, kodwa indawo okuyo ibona ukugcwala kwabantu abaninzi. Olunye usetyenziso kukuba urekhoda udliwanondlebe okanye ingxoxo yephaneli, kodwa kuphela kwinjineli. Push to Talk uyayithulisa iaudio yakho kodwa ikuvumela ukuba ungene ukuba ufuna ukwazisa iqela ngayo nayiphi na imiba yezobuchwephesha.
Useto lweVidiyo likuvumela ukuba ukhethe ukuba iya kuba yintoni na isixhobo sevidiyo yakho. Khetha ikhamera kwimenyu yokuhla kwekhamera.
Iwindow yokujonga kuqala ikunika ukujonga ngokukhawuleza ukuqinisekisa ukuba umqondiso ulungile. Ngaphantsi koSeto lweVidiyo, iinketho eziPhambili ziya kukunceda usombulule naziphi na iingxaki ekunokuqubisana nazo kwisandi.
Cofa iinketho zezaziso kwicala lasekhohlo lesikrini sakho ukuze uchaze ukuba unqwenela ukwaziswa njani xa imiyalezo emitsha ifika.
Ukuba ukhetha ukungafumani izaziso kwidesktop yakho, qiniseka ukuba uvumele ukhetho lweZaziso zeDesktop luvaliwe.
Olu khetho lubhekisele kwi-App Discord yakho kwinqanaba lehlabathi. Unokwazi ukulawula izaziso zeseva ezithile kunye namajelo athile.
Khetha ixesha eliqikelelwayo kwimenyu ehlayo xa uza kuba ungekho.
AFK imele i suka kumaqhosaha ebhodi kwaye isetyenziswa ngokuxhaphakileyo xa abasebenzisi bengasekho kwidesika okanye kwiilaptops kodwa bekwi-intanethi.
Umbhalo ukuya kwiNtetho Izaziso, xa zivunyelwe, ziya kufunda zonke okanye izaziso ezithile.
Ukuba kukho imfuneko, vumela i-Text-to-Speech yeZaziso.
Skrolela ezantsi kwiiSandi ukuze ubone zonke izilumkiso ezikhoyo. Babandakanya
Unokwenza izaziso kwaye usebenzise ezi ndlela zokuthatha isigqibo sokuba zeziphi izaziso oza kuva isilumkiso esivakalayo. Unokulawula ukuba ngowuphi umsebenzi oza kukwazisa ngesilumkiso esivakalayo.
Cofa kwindawo yokutyisa uze ukhangele imidlalo oyidlalayo kwindawo yokukhangela yeMidlalo. Iindaba zamva nje kunye namakhonkco emidlalo oyilandelayo avela kuMsebenzi woKondla, ofikelelwe kukhetho lwaseKhaya.
Cofa isicatshulwa kunye nemifanekiso ukuphonononga indlela ofuna ukuba imithombo yeendaba ivele ngayo kwizithuba ze-Discord, kwaye wenze uhlengahlengiso ukuba ufuna njalo. Imithombo yeendaba iboniswa njani inokwenziwa ngokwezifiso kwisitishi ukuya kwisitishi kwiseva yakho.
Cofa kwiNkangeleko ukuze ulungiselele inkangeleko kunye nokuziva kweNgxabano yakho. Inkangeleko ayikuvumeli kuphela ukuba uhlengahlengise i-Discord kwinqanaba lobuhle, kodwa ikwabonelela ngokufikeleleka kubo nabaphi na abasebenzisi abafuna uncedo kwimbonakalo. Dlala ujikeleze neenketho apha ukuze ubone ukuba yeyiphi eyona nto ilungele wena.
Ukuba ukhetha i-Discord UI yakho ukuba ibe lula okanye ibe mnyama, okanye ukuba ufuna ukutshintsha ubungakanani befonti, inkangeleko ikunika izixhobo zokwenza i-UI yakho isebenze kwiimfuno zakho zofikelelo.
Abaphuhlisi bam bafunda ukungavisisani, kulapho wena-ewe, wena -Ungalwenza ngokwenyani iqonga. Ngaphantsi kwecandelo eliPhambili leNkangeleko, uyakufumana iNkqubo yoPhuculo, eya kuthi incede ekuhlanganiseni i-bots kunye nemiyalelo yesiko kunye ne-Discord's application programming interface (API).
Izicwangciso zokugqibela zoMsebenzisi ezimbini, i-Streamer Mode kunye neLangu ubudala , zigutyungelwe ngokukhawuleza apha. Ukuba ufuna ukusebenza ngolunye ulwimi, khetha ulwimi olukhethileyo phantsi koLwimi ukhetho.
Yintoni i-biotin 10,000 mcg?
Emva koko, ezantsi kuluhlu lwezinto onokukhetha kuzo kwiAkhawunti yoMsebenzisi, kukho ukhetho lweLog Log. Olu khetho ngamanye amaxesha lunikezelwa kuwe xa usungula i-Discord app, kodwa ifikeleleka ngoku apha. Utshintsho lweLog luluhlu lohlaziyo kunye nokulungiswa okukhawulezileyo kwiqonga, kunye nokujonga kwimizamo eqhubekayo yeqela lokuphuhlisa i-Discord yokuphucula iqonga, nokuba kungumsebenzi omtsha, ithuba lokuba uvolontiye iBeta iqela ukuvavanya into entsha, okanye ithuba lokubamba iqela le-Discord ngokubonakalayo. Ukuba utshintsho luza kwiseva yakho, iLog yokutshintsha apho ungafunda khona.
ukukhipha uhlaziyo lweWindows
kwikhawuntara yeyeza ibs
ingakanani ibuprofen ikhuselekile